Hoatran’ny Ahoana Andriamanitra? | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mizo Mooré Myama Ngabere Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Ourdou Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Télougou Umbundu Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
Fanahy tsy hita maso Andriamanitra. Izy no namorona ny lanitra sy ny tany ary ny zavamananaina rehetra. Tsy nisy namorona izy, izany hoe tsy nanam-piandohana. (Salamo 90:2) Tiany hitady azy sy hahafantatra ny marina momba azy ny olona.—Vakio ny Asan’ny Apostoly 17:24-27.
Azontsika fantarina ny anaran’Andriamanitra. Afaka mahalala ny toetrany sasany koa isika, rehefa mandinika ny zavatra noforoniny. (Romanina 1:20) Mila mianatra ny Baiboly anefa isika, raha te hahafantatra tsara azy. Manampy antsika izy io hahafantatra ny toetrany mahatehotia.—Vakio ny Salamo 103:7-10.
Ahoana no fiheveran’Andriamanitra ny tsy rariny?
Mankahala ny tsy rariny i Jehovah, ilay Mpamorona antsika. (Deoteronomia 25:16) Noforoniny tahaka ny endriny ny olona, ka tsy mahagaga raha maro no mankahala ny tsy rariny. Tsy Andriamanitra no mahatonga ny tsy rariny. Nomeny safidy malalaka kosa ny olona. Mampalahelo fa maro no mampiasa izany amin’ny fomba ratsy, ka lasa manao ny tsy rariny. Mampalahelo an’i Jehovah izany.—Vakio ny Genesisy 6:5, 6; Deoteronomia 32:4, 5.
Tia rariny i Jehovah ary tsy havelany hisy mandrakizay ny tsy rariny. (Salamo 37:28, 29) Mampanantena ny Baiboly fa tsy ho ela i Jehovah dia hanafoana ny tsy rariny.—Vakio ny 2 Petera 3:7-9, 13.
Mampanantena ny Baiboly fa tsy ho ela Andriamanitra dia hampanjaka ny rariny